I-Headland Cottage, hamba uye kwizibuko kunye neendawo zokutyela
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKathryn And Angel
Relax kwaye uphumle kule ndawo iphangaleleyo, egcwele ilanga, indlwana yokulala enye. Ibekwe kwindawo ephezulu kufutshane nentliziyo ye-Ulladulla, unokuhamba ngokulula ukuya kwiindawo zokutyela, iRennies Beach, ichibi lolwandle kunye neevenkile. Okanye phumla nje kumngangatho ojonge emantla ngombono wamanzi kwaye wonwabele indlela yokuphila yase-Ulladulla. Thatha uhambo oluya kwindawo yewayini yasekhaya, iPaki yeSizwe, iMilton eyimbali okanye iMollymook elunxwemeni eneendlela ezininzi zokuhamba ezikufutshane. Indawo egqibeleleyo yokubuyela izibini.
Le ndlu iphangaleleyo inembonakalo entle, enelanga esemantla enembonakalo yamagqabi ejonge elwandle. I-Ulladulla yindawo efanelekileyo yeholide kwabo bafuna uxolo, uxolo kunye nendlela yokuphila yaselunxwemeni. Ikhaya liya kufanela umhambi omnye okanye isibini esitshatileyo njengoko indawo yokuhlala inenkosi enesisa, igumbi lokuhlambela eline-ensuite, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye neendawo zokuhlala ezibanzi.
Iveranda enophahla olubanzi ijikeleza ngaphambili kwindlwana ikunika ukurhoxa kwizinto unyaka wonke. Ngeengcango zeglasi ezivulekele kwiveranda ukusuka kwigumbi lokulala kunye neendawo zokuhlala eziqukuqelayo, ukukhanya kwendalo kuyaphuphuma njengoko impepho iqukuqela ukusuka kwiveranda. Kufuphi nayo yonke into i-Ulladulla enokubonelela ngayo, ungahamba uye kwizibuko, echibini lolwandle, eRennies Beach kunye neevenkile okanye uphume uye eLighthouse.
-Iplani evulekileyo yokuhlala kunye neendawo zokutyela
-Ikhitshi langoku, licocekile elineekhabhathi ezininzi kunye nendawo yebhentshi
- Iti kunye nekofu zinikezelwe
- Ukuhlamba impahla
- Akukho mfuneko yemoto, hamba yonke indawo
4.92 · Izimvo eziyi-51
I-East Ulladulla yindawo ezolileyo, kwaye inovelwano loluntu. Nceda uzive ukhululekile ukuthatha uhambo kwaye ukonwabele i-Ulladulla Lifestyle.
Umbuki zindwendwe ngu- Kathryn And Angel
Family friends have combined their lifetime knowledge of the district to provide a warm and welcoming place for visitors to enjoy.
Ukuba ufuna naluphi na uncedo ngexesha lokuhlala kwakho, nceda uzive ukhululekile ukuba undithumelele i-imeyile.
UKathryn And Angel yi-Superhost
Inombolo yomthetho: PID-STRA-3185